Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Bongolava, Menabe sy Vakinankaratra
BONGOLAVA: Mizana 37 sy vatomizana am-polony maro no tsy maintsy nogiazana tany Fenoarivobe tao anatin’ireo 79 natao fanamarinana. Nidina tany an-toerana nanatanteraka asa fanamarinana fitaovam-pandanjana ny DRICC tamin’ity herinandro ity. Hetsika natao indrindra hiarovana ny mpanjifa amin’ny fanambakàna. Nalefa any amin’ny mpanamboatra fitaovana nahazo fankatoavana avy amin’ny MICC moa ireo fitaovam-pandanjana tsy nahafeno fepetra ireo.
MENABE: Nivory niaraka tamin’ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana izay ho mpikambana maharitra hitantana ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) any Morondava ny DRICC. Nohazavaina tamin’izany ny momba ny CCI, ny lalàna miifehy azy, ny mikasika ny Komity mpikarakara ary ny andraikitra sy ny asa miandry azy.
VAKINANKARATRA: Ho apetraka ny rafitra fampahalalàna momba ny sira misy ioda sy fluor any amin’ny Faritra Vakinankaratra. Nisy ny Atrikasa nanomanana izany omaly 22 Jona 2022. Nandray anjara ny DRICC, ny avy amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny ACSQDA ary ireo mpamokatra sira. Niarahana tamin’ny UNICEF ny hetsika.
Article suivant FANATSARANA NY TONTOLON’NY FANDRAHARAHANA
Article précédent Seha-pihariana Lavanila:Hitsinjo ny tombontsoan’ny mpamboly ny CNV
Famerana ny vidin’entana any boeny: Novakiana bantsilana ireo antony mampiakatra ny vidin’entana
par admin · Published mai 3, 2022 · Last modified mai 4, 2022
Tatitry ny vidin’entana ilaina andavanandro avy any amin’ny faritra Sofia sy Boeny
par admin · Published mars 28, 2022 · Last modified mars 31, 2022
Vaovao songadina avy any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana sy Menabe
par admin · Published mars 22, 2022 · Last modified mars 25, 2022